BBC Micro:Bit မိတ်ဆက် – Gniap
BBC micro:bit ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ စိမ်းနေပါသေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတကာမှာတော့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီကလဲ ကျွန်တော်တို့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသား မီဒီယာကုမ္မဏီကြီးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ BBC ပါ။
BBC micro:bit ဆိုတာ ဘာလဲ ?
BBC micro:bit ဆိုတာ အိတ်ကပ်အရွယ်အစားလောက်ပဲ ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ သေးသေးလေးတမျိုးပါ။ ကလေးငယ်တွေ နဲ့ စတင်လေ့လာလိုသူတွေအတွက် နည်းပညာ (Coding) ကို လွယ်ကူစွာနဲ့ လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် Graphical Programming (ရုပ်ပုံတွေ အသုံးပြုပီး ရေးသားရတဲ့ ကွန်ပျူတာ ဘာသာစကား) ကို အခြေခံထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ BBC micro:bit ကို အသုံးပြုပီး အကြံရှိရင် ရှိသလောက် စက်ရုပ်တွေ ၊ တူရိယာပစ္စည်းတွေ အစရှိတဲ့ နည်းပညာ ပုံစံငယ်များစွာကို တီထွင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
“The BBC micro:bit is all about young people learning to express themselves digitally, and it’s their device to own.”
– Sinead Rocks, Head of BBC Learning
BBC micro:bit ထုတ်လုပ်သူများ အကြောင်း
Micro:bit ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ BBC ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ UK ကျောင်းသားသန်းဂဏန်းကို နည်းပညာ (Programming) လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အလွယ်တကူ စတင်လေ့လာနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် BBC ကတော့ Micro:bit ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာက အဲဒီအချိန် မှ မဟုတ်ဘူးလို ဆိုပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်တုန်းကများ ဖြစ်နိုင်မလဲ ? သင်သိပါသလား?
၁၉၈၀ ခုနှစ် ကို ပြန်သွားမယ် ဆိုရင် ပထမဦးဆုံးသော BBC micro ကို ယူကေ ကျောင်းသားများဆီ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် တဲ့ ။ အနှစ် ၃၀ ကျော်အကွာမှာ ပိုမို သေးငယ်တဲ့ ဒီဇိုင်း ၊ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးတွေနဲ့ Micro:bit က တိုးတက်လာတာကို မြင်ရမှာပါ ။
BBC က Micro:bit ကို ဦးဆောင် ထုတ်လုပ်သူ ဆိုပေမယ့် Micro:bit ရေရှည် တိုးတက်ဖို့အတွက် ၊ အရင်းအမြစ်တွေများပြားလာဖို့ အတွက် နဲ့ ဆရာ/ဆရာမတွေ ကျောင်းတွေ တီထွင်ဖန်တီးသူတွေလက်ထဲကို ပိုမို ရောက်ရှိစေဖို့အတွက် Partnership မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာနဲ့ ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှာမှ ထင်ရှားတဲ့ ကုမ္မဏီကြီးတွေ ရဲ့ Micro:bit ကို ထောက်ပံ့မှုတွေကတော့ –
ARM mbed hardware , software development kits နဲ့ compiler services တွေကို တာဝန်ယူပါတယ်။
Element14 ထုတ်လုပ်မှု နဲ့ ပတ်သတ်သမျှ တာဝန်ယူပီး လိုအပ်တဲ့ component တွေကိုလဲ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
Freescale Micro:bit ထဲမှာ အသုံးပြုတဲ့ sensor တွေနဲ့ USB controller တွေ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ Lancaster University – micro:bit runtime ကို တည်ဆောက် ရေးသားပေးပါတယ်။
Microsoft TouchDevelop web-based programming tool တွေကို ထောက်ပံ့ပေးပီး ဆရာ/ဆရာမတွေအတွက် သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းတွေကိုလဲ ကူညီ ဖန်တီးပေးပါတယ်။
Samsung Micro:bit ကို ဖုန်းတွေ တက်ဘလက်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ နဲ့ Android app တည်ဆောက်ပေးဖို့ တာဝန်ယူပါတယ်။
Python Software Foundation python.microbit.org လိုမျိုး micro:bit cloud editor လိုမျိုးတွေအပြင် နည်းပညာပိုင်းအရ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
Official partnership အရ ဆိုရင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၃၀ ကျော် က Micro:bit နဲ့ ပူးတွဲ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
Micro:bit Key Features : Micro:bit အဓိက ထောက်ပံ့ချက်များ
Micro:bit ပေါ်မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရာတွေအများကြီး ရှိပါတယ် ။ အဲဒီ အထဲမှာမှ အဓိက ကျတဲ့ Function တွေကတော့ –
LED မီးသီးလုံးလေးတွေကို အသွင်သဏ္ဍန် ၂၅ မျိုး အထိ ပြောင်းလဲ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ (programmable) ထိန်းချုပ် ခလုတ် ၂ ခု ပါတယ်။
အခြားသော ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ အင်တာနက် အပြင် Bluetooth ဆက်သွယ်မှုလဲ ပါတယ်။
Micro:bit ပေါ်မှာ တပ်ဆင်ပီးသား Compass(သံလိုက်အိမ်မြှောင်) ၊ Accelerometer (အရှိန်တိုင်းတာမှုစနစ်) အစရှိတဲ့ default ပါဝင်ပီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရာ တွေက အခြားသော Microcontroller platform တွေ မှာလဲ ရနိုင်တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် သူ့အရွယ်အစား ၊ သူ့ စျေးနှုန်း ၊ သူ့ အသုံးဝင်မှု အခြေအနေတွေ နဲ့ တွက်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ တကယ်ကို ပြည့်စုံလှပါတယ်။
Micro:Bit Hardware Features
Micro:bit အကြောင်း ကို အပြည့်အစုံ ထပ်မံ သိရှိလိုပါက ဒီ Youtube Video လေးကို ကြည့်စေချင်ပါတယ်။